Indlela yokukhipha ukunakekelwa kwabazali?
Ngokuvamile izingane ziyabheka ukunakekelwa kwabazali njengezimo zengqondo ezingalungile. Izingane zikholelwa ukuthi abazali akufanele bazisebenzise, ​​bengena ngaphakathi emiphakathini yabo. Futhi abazali bahlale benesithakazelo endleleni ogqoke ngayo namuhla, ukuthi yini abayidlayo, banikeza iseluleko sendlela yokulungisa amaphutha okwenziwe ngawe, ngokubona kwabo. Kungaba, noma ngabe usukhulile, uhlala ngokuzimela futhi uhlukile kubo. Yiqiniso, abazali abayithandi lokhu kuziphatha kwabazali babo. Kodwa ungamisa kanjani lo mkhuba wobusuku? Indlela yokuqeda isimo sengqondo esingalungile?
Ziyini izizathu zokungenelela?
Isizathu esiyinhloko ukwesaba kwabazali. Baze bacabange nokuthi ingane isivele ikhulile, ayifuni. Uyesaba kakhulu ukuyeka isilwane sakho ekukhuleni. Awukwazi ukucabanga ukuthi izinqumo ezibalulekile zenziwe kanjani ngaphandle kwazo? Ingane yakho oyithandayo ingayiphendula kanjani ngezenzo zakho nokuphila kwakho?
Yini abazali abayesabayo?
Bahamba ngehora ngeso lengqondo ukuthi kukhona okungajabulisi okumelwe kwenzeke kumntwana. Ngezinye izikhathi kuvela ukuthi induku isuke igobile kakhulu. Lokhu kuboniswa ekunciphiseni okukhulu kwezenzo nezenzo zezingane. Emgwaqweni ungathola ngaphansi kwebhasi, esikoleni bangabanjwa. Uma izinkokhelo ziphakeme, khona-ke kukhona ukukhwabanisa. Futhi ngenxa yakhe angajezisa, ahlangane nentombazane enhle - nalokhu kubi. Uzoshintsha ingane yabo.
Uma esimweni esinjalo umuntu ekhula, uhlale egcwele ama-phobias angadingekile, angamvumeli ukuba aphile ngokugcwele. Ukuziphatha okungalungile kwabazali maqondana nengane yabo kubamba ubugovu babo. Bacabanga ngokuthula kwabo, hhayi ukuthi indoda ekhulile ingangena kanjani ezweni labantu. Futhi, njengomthetho, esemdala, ungena engxenyeni engavamile. Kunzima kuye ukwenza izinqumo ngokuzimela, ngoba abazali bakhe abamfundanga.
Ukwesaba izinqumo ezingalindelekile
Abazali bavame ukwesaba ukuvezwa okungavamile kwengane yabo. Uma bonke onjiniyela behlala emndenini, futhi ingane yabo iba umlutha womculo futhi ifuna ukunikela impilo yakhe kuye, bese imnikeza imicabango embi ngabaculi. Ngokuhamba kwesikhathi, indoda encane iqala ukukholelwa ukuthi abaculi banomlutha kanye nezidakamizwa. Ngakho kancane kancane uqala ukukhohlwa intshiseko yakhe. Futhi hhayi indima yokugcina kulo mdlalo abazali. Kodwa wayengase abe umculi odumile, uma kungenjalo iseluleko "sokunene" sabazali abahle.
Ungakuvikela kanjani ukuphazanyiswa okungalungile?
Ngakho-ke, usuvele ungumdala. Ukuphazamiseka okuhlala njalo kwezihlobo empilweni yakho kuqala ukukucasula, kukuvimbela ekwenzeni izinqumo ezibaluleke kakhulu. Thatha wena bese ubhidliza intambo engabonakali ekuxhuma kubo. Emva kwakho konke, intambo yomzimba inqunywe ngoba ingane ayisadingi ukunakekelwa komama. Uqala ukwenza lokho uqobo. Ukuchazela kahle abazali, ngiyabonga ngokugcina futhi uthi awusayidingi. Isikhathi sokuhamba ngokuphila ngokwakho.
Lungiselela inkulumo yakho kusengaphambili, yikhulume, emi phambi kwesibuko. Khetha isikhathi lapho abazali bejabule, bekhululekile.
Lapho ukhuluma, bheka amehlo abo, ithoni yokukhuluma kufanele ihlaziye, iqede amagama angamahloni. Ngaphambi komlayezo onomthwalo wemfanelo, ukhumbuze uthando lwakho lwaphakade. Bathi bangakwazi njalo ukusekela usizo lwakho nokunakekelwa. Cabanga ukuthi ungavimbela kanjani ukuhlazeka okungathí sina noma ingxoxo emathonjeni aphakeme.
Kungenzeka ukuthi abazali ngeke babuyele kuwe ngaphandle kokulwa. Ukulahla ubuhlobo obunokuthula nabo. Yebo, kuyobangela ukufutheka, ukudumazeka kuwe, futhi mhlawumbe inzondo. Ungaphelelwa ithemba. Isikhathi siphulukisa konke. Ekugcineni bazofika esiphethweni sokuthi usuvele ungumuntu omdala, unelungelo lokuxazulula izinkinga ngokwakho. Ubudlelwano nabazali buzobuyela evamile.
Kodwa kungenzeka ukuxazulula le nkinga ngendlela ehlukile, ngokuphumelelayo. Veza izenzo zakho nezenzo zakho ezifanele, ukuthi awudingi usizo lwabazali kusaba khona. Bona ngokwabo bazobona ukuthi ukufundisa kwabo sekuvele kukuvimbele. Futhi uhambe ngokuthula.
Gcina ubuhlobo obufudumele nabazali bakho, zama ukuwaqonda. Uma ungenayo izingane zakho, kuyoba nzima kakhulu. Kodwa uma zivela, izenzo zabazali bakho ngawe zizocaca. Ngeke ukwazi ukubona noma yini engavamile kuzo.
Indlela yokuwina inhlonipho yabantwana?
Abantu bazizwa kanjani uma owesifazane ebiza kuqala
Ubudlelwano bobaba besilisa, omama nabantwana
I-summer tiramisu ene-strawberries
Ukuzwela ngenyanga yesithathu yokukhulelwa
Iqoqo elihle le-Valentine Yudashkin ePakethe leParis
Usuku lwezeMpilo, imihlahlandlela
Londoloza izinkumbulo ezicacile zonyaka wethenda
Amaphutha omzali ngokubeletha
Amathiphu awusizo ngobuhle nempilo
I-allergenic rhinitis, izimpawu kanye nokwelapha
Amama wonke ayadingeka, omama babalulekile
I-tortilla yaseSpain ne-bacon ebhemayo
Isobho senkukhu enezindwangu